Iincwadi ezikhuthazayo | Uncwadi lweNdaba
Sisetyenziselwa into esidibanisayo, kufuneka ihambelane nochungechunge, uchungechunge lwefilimu, njl. Kodwa asicingi ngeencwadi ezidibanisayo xa ngokwenene zikhona, ngamanye amaxesha kude kube mkhulu kunothotho okanye iimuvi.
Ke, ukuba ufuna ukuzama incwadi kwaye ubambeke kuyo, nazi ezinye izihloko ezinokuthi zilungele ukuze ungabinako ukuzikhupha kumaphepha encwadi de uyigqibe (kwaye xa uyenzile, yiva obo buyatha bokuba sifunde ibali elimnandi).
1 Ziyintoni na ezo ncwadi
2 Imizekelo yeencwadi ezihukayo
2.1 Ingxaki oyishiyayo, nguCarlos Montero
2.2 Ithala leencwadi ezinzulwini zobusuku, nguMat Haig
2.3 Kuthambile ubusuku, nguFrancis Scott Fitzgerald
2.4 ICage of Gold, nguCamila Läckberg
2.5 UMobby Dick nguHerman Melville
2.6 Ukuziphakamisa kunye noKhetho, nguJane Austen
2.7 Iimonologues zelungu lobufazi, nguEve Ensler
2.8 Incwadi ye-Illusions, nguPaul Auster
2.9 NguJohn Verdon, Musa ukuwavula Amehlo Akho
2.10 Baztán Trilogy, nguDolores Redondo
Ziyintoni na ezo ncwadi
Phambi kokuba sikunike imizekelo yeencwadi ezihukayo, sifuna ukujonga ukuba kutheni ungenako ukuzibeka phantsi. Ngokwenene, incwadi ekhobokisayo ayikho kwisihloko esithile, inokuba yenye yeziganeko, imfihlakalo, uthando, uloyiko, ingqokelela yemibongo ... Eyona nto ibalulekileyo kwaye yintoni eyenza loo ncwadi ikwenze ungatyi, ungalali kwaye ungenzi nto ngaphandle kokutyhila iphepha emva kwephepha libali ngokwalo. .
Xa umbhali ekwazi ukubamba umfundi phakathi kwamagama, izivakalisi, imihlathi kunye namaphepha, ngenxa yendlela yokubalisa ibali kunye nesakhiwo sebali, Kuthiwa yincwadi edibanisa amagwegwe.
Ngaba ukho umntu onokuchaphazeleka kuko? Ewe ewe, inyaniso kukuba ewe. Kufuneka kwakhona ukhumbule ukuba asingabo bonke abafundi abaya kufakwa kwiincwadi ezifanayo. Kuyinyani ukuba kukho imisebenzi enabafundi abakhobokileyo kunabanye, kodwa inyaniso kukuba kuya kuhlala kukho umntu oya "kusela" imbali yencwadi.
Imizekelo yeencwadi ezihukayo
Okulandelayo siza kukunika ezininzi imizekelo yeencwadi ezihukayo kwaye, xa uqala ukuzifunda, kukho umzuzu apho awukwazi ukuyeka kwaye ungakhathazeki ukuba ungatyi okanye ungalali ukuze wazi ukuba ibali liza kuphela njani.
Ewe, njengoko besesitshilo ngaphambili, oku kuxhomekeke ngakumbi, kuya kubakho abantu abazifumana zikhobokisa ezi ncwadi, nabanye abangakwaziyo ukuzibamba baphele bezishiya. Yiyo loo nto sikunika imizekelo emininzi.
Ingxaki oyishiyayo, nguCarlos Montero
Kule meko sithetha ngebali likaRaquel, utitshala wesikolo samabanga aphakamileyo oqala ukusebenza njengebambela kwisikolo saselalini, ngakumbi kweso somyeni wakhe. Noko ke, uyayiqonda loo nto umntu athatha indawo yakhe uzibulele aze enze isigqibo sokuphanda ukuba sasiyintoni na isizathu sokuba enze oko.
Ithala leencwadi ezinzulwini zobusuku, nguMat Haig
Ithala leencwadi ...
Le yenye yeencwadi ekusenokwenzeka ukuba ukhe uve kancinane ngayo kwaye kodwa iyakukutsala kakhulu.
Kuyo unayo UNora Seed owathi, engazi ukuba njani, agqibezele kwindawo ebizwa ngokuba yiThala leencwadi ezinzulwini zobusuku. Apho, amnika ithuba lokuphila ngeendlela ezahlukahlukeneyo, ngokungathi wenze ezinye izigqibo aze ngaloo ndlela akwazi oko kwenzekileyo.
Kodwa ngamanye amaxesha olo tshintsho luneziphumo ezinokubeka ubomi bakho emngciphekweni.
Kukho umbuzo obaluleke kakhulu ophendulwa kule ncwadi: yeyiphi eyona ndlela ilungileyo yokuphila?
Kuthambile ubusuku, nguFrancis Scott Fitzgerald
Ubusuku buthambile: 675 ...
Khawube nomfanekiso-ngqondweni wesibini esisuka eUnited States sifika kumlambo iFrench Riviera. Bakumgangatho ophezulu, oko kukuthi, bazizityebi. Bahle kwaye ababonakali ngathi bazibandeza kwanto. Kodwa inyaniso kukuba Bafihla imfihlelo abangayi kufuna ukuba yazi nabani na.
ICage of Gold, nguCamila Läckberg
Ikheji yeGolide: I...
Kubathandi beenoveli zolwaphulo-mthetho, le yenye yezona zinto zibalaseleyo onokuthi uzifunde, ukusukela oko Umdlali oyintloko uba "ngumphindezeli" yaye akayi kuyeka de ahlawule wonke umntu omenzakalisayo.
UMobby Dick nguHerman Melville
Ewe, iklasikhi. Kwaye nokuba iminyaka ihamba, iya kuqhubeka iyenye yezona ncwadi zibandakanyayo ekufuneka zinconyelwe ngenxa yendlela ebaliswa ngayo, kunye nendlela ehanjiswa ngayo. abanqwenela ukuba umlinganiswa oyintloko abambe umnenga, ababaninzi ababhali abaphumelelayo.
Ukuba ubonile kuphela i-movie, kuninzi kwincwadi oye wayiphosa, kwaye uya kubona ukuba, emva kokuyifunda, uya kuqonda ukuba bekungcono ukuba uqale ekuqaleni.
Kubalandeli bothando, enye yeencwadi eziluthayo esinokuyincoma yile, Ikratshi kunye noCalulo. Kuyo usisa kwelinye ixesha kodwa kwangaxeshanye usinika a umbono womfazi osele ekhulile ukuba akakulungelanga ukuthobela ukuthanda kwebutho labantu okanye abantu.
Iimonologues zelungu lobufazi, nguEve Ensler
Iimonologues zelungu lobufazi ...
Eli bali latshintshwa libe ngumdlalo kwaye lisekelwe, njengoko igama lalo libonisa, kwisini sowesifazane. Wenza ntoni umbhali? Udliwano-ndlebe ngaphezu kwe-200 yabasetyhini bezizwe ezahlukeneyo kunye nobudala ukuxelela, ngendlela eyonwabisayo neyonwabisayo, izihloko ezinxulumene nobudlelwane bezesondo kunye nesondo.
Incwadi ye-Illusions, nguPaul Auster
Incwadi ye-Illusions ...
Khawucinge ukuba ulahlekelwe ngumfazi wakho kunye nomntwana wakho, ukuba akukho nto iseleyo ebomini. Yile ndlela i-protagonist yencwadi, uDavid Zimmer, avakalelwa ngayo, ngubani kuphela intengiso kamabonakude edlala nomdlalo wefilimu ongathethiyo uHector Mann ikwenza ube nemincili ngokubhala incwadi ngaye.
Ngoko ke, kuphando lwakhe, uqala ukuqokelela iifilimu athathe inxaxheba kuzo, amaxwebhu abhekiselele kuye kunye nemfihlakalo eqhubeka ikhula kwaye ikhula. Ukusa kwinqanaba lokuba ngequbuliso ibhinqa ligqobhoze endlwini yakhe limkhombe ngompu.
NguJohn Verdon, Musa ukuwavula Amehlo Akho
Kubalandeli bemfihlakalo abangenako ukuyibeka phantsi incwadi ide igqitywe, kwi-Sukuvula amehlo akho unomzekelo ocacileyo wencwadi ongayi kuyiyeka.
Kuyo sinoDavid Gurney njenge-protagonist, indoda ecingelwa ukuba ayinakunqotshwa, de kube Dibana noyena mbulali ukrelekrele ongazange wambona ngaphambili.
Ewe, khumbula ukuba yinxalenye yesibini, kwaye eneneni i-saga yi-7, ngoko unokufuna ukuqala ngeyokuqala, ndiyayazi into oyicingayo.
Baztán Trilogy, nguDolores Redondo
Kule meko, njengeencwadi ezikuxhokonxayo, asicebisi enye, kodwa ezintathu. Bonke inokufundwa ngokuzimeleyo, nangona kungcono ukuqala ngeyokuqala.
Ukuba iifilimu (kuba zitshintshwe) sele zilungile kwaye zixhomekeke, kwimeko yeencwadi sinokuthi awuyi kufuna ukuzikhulula de ziphele zonke.
Sazi njani ukuba kukho iincwadi ezininzi ezidibanisayo, Ngaba ungasinika eminye imizekelo yabo uyifundileyo kwaye baye baba likhoboka ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Iincwadi ezidibanisayo
Cecilia kleiman sitsho
Ulwaphulo-mthetho neZohlwayo! Ngokupheleleyo!
Impendulo kuCecilia Kleiman
Iincwadi zeKrisimesi kunye namabali. Ukukhetha